Iiapps zemozulu ezi-6 ukuze imozulu ingakufumani ungalindelanga 🥇 I-Emulator.online ▷ 🥇
Ngubani ongazange ahlaselwe yimozulu xa eshiya ikhaya lakhe ngaphandle kwesambrela? Okanye uphume ucinga ukuba kuzobanda kwaye ufumane elona langa likhulu? Ngenxa yezi zizathu nezinye, ukuba noqikelelo lwemozulu elungileyo kubalulekile ukunqanda ezinye iziganeko ezingalindelekanga. Emva kwayo yonke loo nto, imozulu ikho ukusinceda.
Namhlanje kukho uninzi lwezicelo zemozulu yemozulu ukunqanda amaxesha aneentloni, njengokumanzi emsebenzini okanye ukungatshisi ilanga ngosuku lwepikniki epakini. Kungenxa yoko le nto i-SeoGranada yenze olu luhlu ngolona luhle namhlanje. Phuma:
I-AccuWeather yenye yezonaapps zemozulu zidumileyo. Ikwayenye yezona zichanekileyo, ukubonelela ngolwazi lwemozulu yexesha lokwenyani, kunye nezinto ezininzi ezipholileyo.
Itekhnoloji esetyenziswe yiAccuWeather iqinisekisa esinye seziqikelelo zezulu ezinokuthenjwa ezikhoyo namhlanje. Izaqhwithi kunye / okanye utshintsho olukhawulezileyo kwimozulu luyalumkiswa ngezilumkiso ezichanekileyo, ngoko ke akukho mntu ubanjiswa ngumsitho ongalindelekanga wemozulu.
Ukongeza ekwenzeni ukuba ukwazi ukujonga uqikelelo lwangoku okanye kwiiveki ezimbini ukusukela ngoku, iAccuWeather ibonelela ngolwazi ngumoya, ukufuma kunye nokuphola komoya.
Ukukhuphela iAccuWeather, khetha inkqubo yokusebenza: Android / iOS.
Izicelo ze-Astronomy zokujonga indalo yonke ngexesha lokwenyani
NgeClimatempo ungayiqonda imozulu naphina. Ungajonga ngexesha lokwenyani, ukongeza ekubeni neyure, yonke imihla okanye idatha yosuku olulandelayo.
Ukwenza yonke into ibe nomtsalane ngakumbi, kunokwenzeka ukuba ufumane iindaba ezinxulumene nemozulu kwaye wazi ukuba kwenzeka ntoni emhlabeni. ndiyixabisule widget kwisicelo, khetha ngokulula uhlobo lomxholo kunye nokufikelela ngokuthe ngqo ukusuka ekhaya okanye ukuvala isikrini.
Kwisicelo kukho ulwazi ngesantya somoya, ukubonakala, uxinzelelo lomoya, ukuphuma nokutshona kwelanga amaxesha, ukufuma komoya, phakathi kwabanye. Insiza isalandela izaqhwithi.
Ukukhuphela i-Climatempo, khetha inkqubo yokusebenza: i-Android / i-iOS.
Enye yezona zicelo zisetyenziswayo xa kuziwa kwimozulu, iYahoo Weather ine-design enobuchule kwaye iyathandeka, izisa iifoto ezininzi ezilungelelanisa indawo, ixesha kunye nemozulu.
Olu lwazi luthiwe thaca kwiingxelo ezibanzi nezineenkcukacha, nesishwankathelo semozulu ukuya kwiintsuku ezili-10 ezizayo. Kwimephu yokuhlangana, unokufumana amaqondo obushushu kwiindawo ezahlukeneyo kunye nolwalathiso kunye nesantya somoya.
Izilumkiso zemozulu ezingalunganga zikunceda ukuba ucwangcise usuku lwakho, kunye nemifanekiso enomdla ebonelela ngedatha enjengokuphuma kwelanga nokutshona kwelanga kunye noxinzelelo lomoya. Iziganeko zemitha ye-ultraviolet (UV) ikwafumaneka, kunye nokufuma komoya.
Ukukhuphela i-Yahoo Tempo, khetha inkqubo yokusebenza: i-Android / i-iOS.
4. Imozulu kunye neradar
Ngokuqikelela imo yezulu kwangoko, kunye neClima kunye neRadar ungawathintela amaqondo obushushu kwiiyure ezingama-24 ezizayo okanye kwiintsuku ezili-14 ukusukela ngoku. Kwaye, kunjalo, ininzi yolunye ulwazi ukugcina yonke into ihamba njengoko bekucwangcisiwe, ngaphandle kokubeka emngciphekweni wokonakaliswa kwemvula ngaloo mini epakini!
Kusenokwenzeka ukuqinisekisa isantya somoya, ukubonakala, amathuba emvula, ukuphuma nokuphuma kwelanga, imvakalelo yokufudumeza, phakathi kolunye ulwazi. Ukufumana idatha echanekileyo, unokubandakanya indawo ngqo kwisicelo.
Ukukhuphela iMozulu kunye neRadar, khetha inkqubo yokusebenza: Android / iOS.
5. Ixesha laseBrazil
Elinye lawona manqaku anomdla kakhulu kwiTempo Brasil lithuba lokuba nezinto oopopayi eziyinyani abavumela ukuba zibonise utshintsho lwemozulu ngokukhawuleza. Ngokuhlaziywa rhoqo, lonke ulwazi lufumaneka ngokulula kwi-interface enomdla.
Ungajonga imozulu ukuya kwiintsuku ezili-10 kwangaphambili. Konke kwingxelo eneenkcukacha, ebandakanya ulwazi ngemvula, umoya, imitha ye-ultraviolet, uxinzelelo lomoya, phakathi kwezinye iinkcukacha.
Ukulungiswa kweeselfowuni kunye neetafile, ngeTempo Brasil unokufikelela kwiimephu ezisebenzisanayo, ezenza kube lula ukufumana indawo ngqo ekhethwe ngumnyhadala okanye ukhenketho. Ilungele nabani na ofuna isicelo esilula kodwa esisebenzayo.
Ukukhuphela iTempo Brasil, khetha inkqubo yokusebenza: i-Android / i-iOS.
6. Uqikelelo lwemozulu
Ngalesi sicelo, unolwazi ngexesha lokwenyani, ukwazi ukudibana nemeteorology phantse kwihlabathi liphela. Ukusuka eRio de Janeiro ukuya eLondon, ukusuka eNew York ukuya eTokyo, uhambelana notshintsho lwemozulu oluncinci kwaye uzilungiselela usuku ngaphandle kweziganeko ezingalindelekanga.
Ukongeza kwidatha yeqondo lobushushu, uQikelelo lwemozulu lubonisa ulwazi kwingxelo ebanzi, kuzo zombini iidigri Celsius kunye neFahrenheit. Unokufumana uxinzelelo lomoya, ukubonakala, ukufuma komoya, imvula kwiindawo ezahlukeneyo kwiimephu ezisebenzisanayo, isantya somoya kunye nolwalathiso, nokunye okuninzi.
Hayi widget Kukho ulwazi oluhlaziyiweyo ngalo lonke ixesha, ukukwazi ukuqwalasela imozulu yeentsuku okanye iiveki ezizayo.
Ukukhuphela uqikelelo lwemozulu, cofa apha.
Ngeeapps ezingasentla, kukho uluhlu olupheleleyo lolwazi malunga nemozulu kunye notshintsho olunokwenzeka ngesiquphe olunokonakalisa izicwangciso zosuku olumangalisayo. Jonga imvula ukuze ungabhaqwa!
Ngoku ukuba unolwazi malunga nokungafakwa emsebenzini, ungazi njani ngee -apps ezili-10 zokubala kwaye ugcine umkhondo wokuba lingakanani ixesha elishiyekileyo de kufike umtshato okanye olo hambo lumangalisayo?
Ukomeleza iimvakalelo, sikwabonisa ukusetyenziswa kwamabinzana asi-8 ukukhuthaza yonke imihla. Nangona kunjalo, ukuba sele kunetha kwaye usendleleni eya emsebenzini okanye eyunivesithi, sinezicelo ezili-10 zokufunda iincwadi kwiselfowuni kwaye onwabele amaxesha adinisayo okufunda okanye ukonwaba.